Famolavolana sary, famolavolana indostrialy ary fonosana | Famoronana an-tserasera
Ny famolavolana fonosana dia mifandray akaiky amin'ny sehatry ny asan'ny mombamomba roa miavaka: Ny mpamorona sary sy ny mpamorona indostrialy. Ity fifehezana ity dia miorina amin'ny fifamatorana eo amin'ireo rantsan'ny famolavolana roa ary ao anatiny dia mifamatotra. Ohatra, ny sarin'ny mpamorona sary dia tompon'andraikitra amin'ny famahana ny olana na toe-javatra mifandraika amin'ny hafatra sy ny kabary an-tsary ary koa ny fampahalalana an'io natiora io izay niparitaka tamin'ny haino aman-jery samy hafa. Na izany aza, ny endrik'ilay mpamorona indostrialy dia miavaka amin'ny maha olona matihanina azy izay ny tanjony dia ny hampivelatra, hamorona ary hampihatra tetikasa ho an'ny fanjifana betsaka, ny fihinanana indostrialy na andiany.
Ary izany tokoa misy lafin-javatra maro izay mitaona ny tetikasa famonosana mahomby. Ny singa sary sy ara-dalàna ao anaty fonosana ary koa ireo mampiavaka azy mifameno dia misy fiantraikany lehibe izay mamaritra ny fahombiazana na ny tsy fahombiazan'ny fivarotana ny vokatra izay ao ambadiky ny lahateny iray manontolo novolavolaina. Saingy tsy azontsika atao ny tsy miraharaha ny maha-zava-dehibe ny mpamorona indostrialy amin'ny fanamboarana ny lahatsoratray satria izy no hiandraikitra ny famoronana zavatra hozaraina sy hamaritana ara-barotra fa koa hamahana ny karazan'asa rehetra (izay manakana ny kabarin'ny mpanao sary) sy ny hatsarana. amin'ny alàlan'ny fampiharana fitaovana sahaza azy ary ny fampifanarahana amin'ireo teknolojia famokarana farany sy fironana. Azontsika atao ny milaza avy eo fa ny fahaizany amin'ny maha-mpamorona mpamorona ao anatin'io dingana io dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny vokatra indostrialy amin'ny alàlan'ny endriny. Ny mpamorona indostrialy dia manana ny fahaiza-manao sy ny traikefa ilaina amin'ny fananganana, famolavolana ary fitantanana faritra samihafa amin'ny famolavolana, manomboka amin'ny famoronana fonosana vokatra ka hatramin'ny famolavolana ny karazana fanaka rehetra.
Ao anatin'ny tontolon'ny fonosana dia ahafahantsika manavaka faritra roa samy hafa tsara:
Misy ny famolavolana sary izay rehetra mifandraika amin'ny fiteny hita maso sy ny fifandraisana amin'ny marika. Eto izahay dia miresaka momba ny fomba manokana kokoa amin'ny famolavolana marika (ny logo an'ny orinasa sy ny fanavaozana azy manaraka), ny fampiroboroboana ny katalaogy na ny lokon'ny lokon'ny orinasa (ary koa ny fampivoarana ny fitsipiky ny orinasan'ny orinasa namboarina ao amin'ny boky mifandraika amin'izany), ny fomba sary izay tsy maintsy ampiasaina sy ampiasain'ny marika voatonta ary sns sns. Azontsika atao ny milaza amin'ny andalana ankapobeny fa ny mpamorona sary dia manandrana manambatra ny fomba fiasa sy ny fihetsem-po, noho izany ny singa ara-psikolojika dia mifandray akaiky amin'ny fivoaran'ny asany. Ny loko, ny endrika ary ny firafitry ny maso dia misy fiatraikany mazava koa amin'ny fahatsapana sy ny sain'ny mpampiasa (sy ny mety ho mpanjifa), ka izany no ifandraisany akaiky amin'ny departemantan'ny marketing. Ny mpamorona sary dia tsy maintsy mihevitra andian-javatra maromaro (ny toetoetran'ny vokatra, ny orinasa, ny mpanjifa ary ny mpihaino izay manaraka marika iray, lafiny ara-dalàna, ara-drafitra, ara-pihetseham-po ary ara-psikolojika) hanovana lahateny mahery ho sary. Izy no tompon'andraikitra amin'ny famolavolana ny fampahalalana ho hita ao satria ny kaontenera dia mamoaka fampahalalana marobe momba ny atin'ny vokatra iray: ny fangaro sy ny toetra, ny fiaviany, ny mahasoa, ny fameperana, ny fitandremana na ny torolàlana momba ny fampiasana.
Famolavolana indostrialy dia misy ny andiana hetsika izay mamaritra ny firafitry ny kaontenera iray, mazava ho azy ny fiheverana ireo anton-javatra toy ny toetran'ny vokatra ho fonosina, ny endrika, ny refy na ny endriny, ary koa ny lanjany sy ny hakitrokisany. Ny fahalemena na ny fanoherana ny vokatra izay hosaronan'ny kaontenera dia manan-danja ihany koa, ka izany no antony tsy maintsy hitantanana ny famolavolana sy ny famolavolana kaontenera izay manome ny fepetra tsara indrindra hitehirizana sy hiarovana ny singa tsirairay. Amin'io lafiny io dia tsy maintsy manana fahalalana vitsivitsy ihany koa ianao momba ireo fitaovana hampiasana azy sy ny toerana misy ny vokatra, satria ny antony ivelany sy ny tontolo iainana toy ny tsindry, ny hafanana ary ny hamandoana dia mety hisy fiantraikany amin'ny vokatra sy ilay kaontenera mihitsy. Amin'izany rehetra izany dia tsy maintsy ampidirintsika ny loza mety hitranga amin'ny fizarana ary mazava ho azy ny toetra azo ampiharina sy azo ampiasaina izay azo apetraka avy amin'ny famolavolana kaontenera, zavatra iray ilainao ny fanohanana na ny marimaritra iraisana avy amin'ny mpamorona sary. ary departemanta hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Famolavolana sary, famolavolana indostrialy ary fonosana